Kujeka: Yemahara Heatmaps uye Session Rekodha yeWebhusaiti Optimization | Martech Zone
Kujeka: Yemahara Heatmaps uye Session Rekodha yeWebhusaiti Optimization
China, December 30, 2021 China, December 30, 2021 Douglas Karr
Sezvo isu takagadzira uye nekugadzira tsika Shopify theme yedu online dress shop, taida kuona kuti takagadzira inoyevedza uye yakapusa ecommerce saiti isingakanganise kana kuremedza vatengi vavo. Mumwe muenzaniso wekuyedzwa kwedu kwekugadzira waive a mamwe mashoko block yaive nekuwedzera ruzivo nezve zvigadzirwa. Kana isu tikaburitsa chikamu munzvimbo yekusarudzika, inogona kusundira pasi mutengo uye kuwedzera kubhatani rengoro. Nekudaro, kana isu tikaburitsa ruzivo rwuri pazasi, muenzi anogona kupotsa kuti pakanga paine mamwe mashoko.
Takasarudza kugadzira chikamu chekushandura chakanyorwa nemazvo More Information. Nekudaro, patakachiburitsa pasaiti, takabva taona kuti vashanyi vaive vasiri kubaya pachikamu kuti vawedzere. Kugadziriswa kwacho kwaive kwakapusa ... chiratidzo chidiki padivi pezita rechikamu. Payakangoitwa, takatarisa maheatmaps edu uye takaona kuti nhamba yakawandisa yevashanyi zvino vapindirana neiyo toggle.
Dai tisina kurekodha masesheni uye kugadzira heatmaps, tingadai tisina kukwanisa kuona nyaya kana kuedza mhinduro. Heatmapping chinhu chakakosha kana iwe uchigadzira chero mhando yewebhusaiti, ecommerce saiti, kana application. Izvo zvakati, heatmapping mhinduro dzinogona kudhura zvakanyanya. Yakawanda yakavakirwa pahuwandu hwevashanyi kana masesheni aunoda kuteedzera kana kurekodha.
Nechemumoyo, hofori muindasitiri yedu ine mhinduro yemahara iripo. Microsoft Kujeka. Ingoisa iyo Clarity yekutevera kodhi mune yako saiti kana kuburikidza neyako Tag Management chikuva uye uri kusimuka uye uchimhanya mukati meawa sezvo zvikamu zvinotorwa. Kunyangwe zvirinani, Kujeka kune kubatanidzwa kweGoogle Analytics… kuisa chinongedzo chiri nyore chekutamba kwechikamu mukati meGoogle Analytics dashboard! Kujeka kunogadzira chimiro chetsika chinonzi the Clarity Playback URL ine chikamu chidiki chekuona peji. Side note… panguva ino, unogona chete kuwedzera imwe webhu pfuma kuti ubatanidze neClarity.
Microsoft Clarity inopa zvinotevera maficha…
Gadzira heatmaps otomatiki kumapeji ako ese. Ona panodzvanya vanhu, zvavanofuratira, uye kuti vanopenengura kusvika papi.
Tarisa mashandisiro anoita vanhu saiti yako nemarekodhi echikamu. Ongorora zviri kushanda, dzidza zvinoda kuvandudzwa, uye edza mazano matsva.
Insights uye Segments
Kurumidza tsvaga apo vashandisi vanovhiringidzika uye shandura matambudziko aya kuve mikana.
Kujeka ndeye GDPR uye CCPA yakagadzirira, haishandise sampling, uye yakavakirwa pane yakavhurika sosi. Zvakanakisa pane zvese iwe unonakidzwa ese maficha eClarity pamutengo we zero zvachose. Iwe haufe wakamhanyira mumiganhu yetraffic kana kumanikidzwa kukwidziridza kune yakabhadharwa vhezheni… ndeye mahara zvachose!
Saina Kuitira Microsoft Clarity
Tags: Zvakajekaecommerce optimizationmicrosoft kujekesarekodhi rekodhisaiti optimizationyokuedzwawebsite optimization
Aspire: Iyo Influencer Yekushambadzira Platform Yepamusoro-Kukura Shopify Zvigadzirwa
Behavioral Advertising vs. Contextual Advertising: Ndeupi Musiyano?